Tenga Usimbe Risina Ribhoni Musoro Wemusoro Bvudzi Kukomberedza - Mahara Kutumira & Hapana Mutero | WoopShop®
Simbe Isina Ribhoni Musoro Wemusoro Bvudzi Kupeta
ruvara 7 2 8 9 10 28 29 26 27 24 25 1 3 22 23 20 21 18 19 16 17 14 15 12 13 6 11 4 5
Simbe Isina Ribhoni Musoro Wemusoro Bvudzi Kukombama - 7 yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Item Rudzi: Simbe Curler
Ruvara: Pinki, bhuruu, yero
Kukura: Kukora simbi kureba 1M / 39inch
Bvudzi rinoshanda: Zvese
Isina kupisa Curling Rod Headband
Isa tsvimbo yakakombama pamusoro wako kunge bhanhire remusoro, unogona kuimonera kumusoro kana kuigadzira nebvudzi rebvudzi senge ponytail, uye wozoputira bvudzi rakaoma kana rakanyorova kune rimwe divi rebhendi rinokonoka uye rigadzirise bvudzi rebvudzi pasi. Ita shuwa yekusimbisa uye kutanga padyo nepamusoro pemusoro wako. Bvudzi rinogona kunge rakanyorova mukati mezuva rinogara kweawa kana maviri, kana vhudzi rakanyorova kana kuoma husiku hwese.
Curling Ribbon haizokuvadze bvudzi rako
Isina kupisa curl bvudzi ribhoni ndeyekukupa iwe nyowani nzira yekukomberedza bvudzi rako rakagadzirwa kuti uwane runako curls pasina kuisa kupisa mubvudzi
Usati waenda kunorara husiku, peta bvudzi rako nerabhoni yakakombama, putira vhudzi rako pamatanda maviri ekumonera, worisunga nebhatani, uye woriputira mumusoro mako. Muka mangwanani uye iwe unogona kumonera zvinoshamisa curls pasina kushandisa imwe nguva.
Inokodzera kutakura kumba kana panzendo dzebhizinesi, uye inokodzera kushandiswa kwebvudzi nyoro. Ita kuti uve nevhudzi rakanaka zuva nezuva.
Iyo yakasununguka uye yekugadzira curling iron zvakare chipo chakakwana, chakakodzera mhuri, shamwari, uye vaunoshanda navo kuti vave neakanaka makushe bvudzi.
2x Mhete yebvudzi
1x curling simbi
Kubva paongororo dze 21
Hwakanaka Hunhu, Wepamusoro sevhisi
Huru mhando, ndatenda